warkii.com » Breaking News: Priyanka Chopra oo Matrin 4 la hogaamin doonto atootaha Keanu Reeves, tani waa Global Star muran la’aan!!
Breaking News: Priyanka Chopra oo Matrin 4 la hogaamin doonto atootaha Keanu Reeves, tani waa Global Star muran la’aan!!
Xidigta caalamiga noqotay Priyanka Chopra Jonas ayaa gacanta ku dhigtay taxanaha ugu weyn Hollywood ee Matrix qeybtiisa afaraad (Matrin 4) warar goordhow soo baxeen ayaana arinkaan ka dhawaajiyeen guud ahaan taageerayaasha PeeCee ayaana guul weyn usoo hoyotay.
Matrix waa mid kamid ah taxanayaasha ugu guudha weyn abid la sameeyay waxaa la sheegay inee Priyanka shaashada la qeybsan doonto atooraha Filimkaan Keanu Reeves kaaso doorkuusa Neo wato goordhow ayeena howshiisa bilaawan doonto taxanahan qeybtiisa afaraad.
Mashruucan waxaa kaloo wax ka jilayaan Carrie-Annne Mos, Yahya Abdul Matin iyo xidigo kale waxaana la sheegay in bandowga hader jiraba howshiisa sii bilaawan doonto balse waxaa la daawan doonaa oo daafaha caalamka dhan laga wada daawan doonaa 1 April 2022 maadama howshiisa aad u dheertahay waana taxano weyn oo si caalami ah loo sameeyn doono.
Priyanka Chopra ayaa darajadeeda Hollywood sare usii qaadeysa hadii taxanahan sameyso inaba caadi ma ahan xidigtaan muran la’aana waxay xili hore noqotay xidig caalami ah waana atiriishada hindiya kasoo jeeda ee Hollywood deg deg maqaam weyn ka gaareysa.